Argentina Kwathi komthetho wezimbiwa entsha kule veki - China JP Metal & Equipment
abasemagunyeni Argentina, abadlali shishino kunye neemanyano kulindeleke ukuba asayine le veki isivumelwano ezimayini elide ilindelwe federal ukuba nobunye imithetho ekhoyo elizweni liphela, njengenxalenye yeenzame okoko ukutsiba-ukuqala utyalo-mali kweli candelo.
Olu hlanga, kanye othandwayo-zimali imigodi, iye yawa emva abamelwane zayo Chile kunye Peru nangona equlathe iidipozithi zizityebi zobhedu, igolide, isiliva, zinc.
De kube ngoku, imimiselo basekuhlaleni kuphela babenobungonyama kodwa ezahlukahlukeneyo, kunye ezisixhenxe amaphondo 23 eli lizwe ukuba uvalwe ngokupheleleyo ngokusetyenziswa benqanda ukuba nemibandela ephathelele kokusijikelezileyo.
Ekubeni kokuthatha ofisi kuka-2015, uMongameli Mauricio Macri iye nokwamkela amanyathelo ukuvuselela kushishino lwezimbiwa lizwe. Enye abo yokuqala yokunqanda irhafu-5% kwi iinkampani zemigodi namandla ngoFebruwari kunyaka ophelileyo.
Kwakhona bechithe a ukwalelwa iinkampani zemigodi angaphandle ukuthumela ingeniso eyenziwe Argentina bemke kwelo zwe.
Ngoku, ukuphatha kwakhe kugqitha i komthetho wezimbiwa lonke ngethemba kwacaba indlela yokuba injongo Macri kaThixo zibalaseleyo - to utyalo kabini kwicandelo ku $ 25 billion kwiminyaka esibhozo.
Phantsi uMongameli wangaphambili Cristina Fernandez, ngubani bandisa indima karhulumente , Argentina wafumana $ 10 yezigidi zezigidi kuphela kwisithuba 2007-15. Kwiminyaka efanayo, utyalo zemigodi eChile kaThixo baba $ 80bn kunye Peru i $ 52bn.
Lo mthetho mtsha, iphepha lendawo La Mbiko Austral Iingxelo (ngeSpanish), ibimele ukuba inike uzinzo irhafu kubatyali, ukunceda ukuthintela ukubethabethana kunye noorhulumente basekhaya kunye lizuze inkxaso kuluntu lwengingqi kwemigodi, ekuthandazeni efanayo njengoko urhulumente wangaphambili wenza noshishino oyile. Kodwa umhlaziyi BMI Research zilumkisa imingcipheko efutshanisileyo na onokutshitshisa izicwangciso Mecri esithi:
"Data Esibuthathaka-kunoko bekulindelwe kwezoqoqosho Q117 icebisa ndinyuka imingcipheko ide ukuhlaziya yethu yokukhula GDP yokwenene 3.1% ngo-20 17 kunye namathuba iliphamba nkqubo kuya kujongela phantsi ukukhula," bebhala. "Ukuba ukukhula organic na ziyahlala phezu kwiinyanga ezizayo, angalawuliyo Macri ingadodobaliseka buthathaka kunyulo lwaphakathi enyakeni Oktobha, leyo wabona imigaqo-nkqubo yezoqoqosho inch ukuya nkqubo etyekele kakhulu ababengaphambi kwakhe (...) Ngokwemigaqo kwishishini lezemigodi, nayiphi shift kude ishishini Macri xa iinguqu lobuhlobo wayeza oyike utyalo-mali kunye nokungaqiniseki ezikhokelela unyulo lwaphakathi enyakeni ziya kulibazisa ezinye izigqibo zokugqibela utyalo-mali. "
Iingcali BMI likaThixo lithi omnye umngcipheko iya kuvela ziyapicothwa yokwanda yokusebenzisa izisebenzi amanzi, nto leyo enokubangela ukuba ekuqaqambiseni ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kweenkampani kunye noluntu lwasekuhlaleni kunye ezikhokelela nemimiselo ezongezelelweyo.
"Ngoxa silindele ingqalelo ekuxhaseni ukukhula kushishino lwemigodi kwinqanaba federal ukuba ukulinganisa imiba yephondo, inkcaso zasekuhlaleni kunye noxinzelelo lwezopolitiko akukhathaze nomtsalane Argentina yakhe njengendawo yotyalo kwemigodi," kuphetha BMI.